Sida loo xadido waqtiga aad mobilkaaga ku isticmaaleyso EMUI | Androidsis
Saacado badan ayaan ku qaadaneynaa isticmaalka taleefanka gacanta dhammaadka maalinta, ama inaad ka jawaabto fariin, hubi boostada ama hawl shaqo. Dad badan ayaa hortooda ku qarash gareeya celcelis wanaagsan, laakiin waxa ugu caafimaadka badan waa in waqti cayiman loo sameeyo, adiga iyo carruurtaadaba.
Waxaa jira codsiyo kala duwan oo ka socda Play Store oo noo oggolaanaya inaan xadidno isticmaalka taleefankeenna inta lagu jiro saacadaha maalinta, laakiin EMUI ee xarumaha Huawei iyo Honor waxay leeyihiin xaddid gudaha ah. Waa wax shaqeynaya, waxaa loo yaqaan Balance Digital waxayna u egtahay Nolosha Dijital ah, ikhtiyaarka ugu dambeeya ee laga heli karo soosaarayaasha saddexaad ee Android.
Kuwa isticmaala Huawei iyo Honor waxay awoodi doonaan inay xadidaan saacadaha isticmaalka Balance Digital codsi gaar ah ama taleefanka oo dhan. Shuruucda waa la isku habeyn karaa, waad go'aamin kartaa saacadaha aad ku adeegsan karto iyo kuwa kale oo aan ku habboonayn, haddii ay tahay inaad xoogga saarto shaqada.
Mar alla markii aad furto ikhtiyaarka, waxay leedahay xakameyn waalidnimo oo macquul ah, maxaa yeelay waxay ku weydiin doontaa cidda qalabkan adeegsan doonta, ha ahaato adiga ama ilmahaaga. Xaaladda labaad waxay ku habboon tahay Xakamaynta Waalidka oo waxaad awoodi doontaa inaad xaddido bogagga qaarkood ee internetka, codsiyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Si aad xad u yeelatid waqtiga aad ku isticmaalayso moobiilka EMUI waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Fur Nidaamyada ku saabsan qalabkaaga Huawei / Honor oo leh EMUI
Hadda marin u hel ikhtiyaarka "Digital Balance" oo ku dhufo Start
Markaad gudaha gasho dooro "I" ama "Ilmahayga", marka aad doorato riix OK
Hada mar "Waqtiga isticmaalka maareynta" waa la hawl gelinayaa waxaad dhigi kartaa miirayaasha aad rabto, tusaale ahaan waqtiga hore ee shaashadda, xaddidaadda dalabka iyo waqtiga isticmaalka
Codsigu wuu sii yara socdaa, sidoo kale wuxuu leeyahay «Digniinta Dareenka», ku habboon haddii aad si qaldan u taagan tahay waxay ku tusi doontaa farriin kaa digaysa
Xulashada ugu dambeysa waa Digital Balance PIN, waxay ku weydiin doontaa inaad dhaqaajiso si aad u bedesho goobaha Balance Dijital ah, waxa ugu fiican ayaa ah inaad mid dhigto si uusan ilmahaagu u badalin oo uu u heli karo codsiyo, ciyaaro ama bogag gaar ah.
Isu dheellitirka EMUI wuxuu kuu sheegi doonaa waqtiga isticmaalka ee aad caadiyan qabatoHaddii aad riixdo "Dheeraad", waxay kuu sheegi doontaa waqtiga isticmaalka "Maanta" iyo tii toddobadii maalmood ee la soo dhaafay, ama daalacashada, adoo adeegsanaya Telegram, WhatsApp iyo codsiyada kale ee aad sida caadiga ah uga furto taleefankaaga.
Haddii aad rabto inaad awood u yeelato inta lagu jiro saacadaha shaqada, waxaa ugu wanaagsan inaad adeegsato xeerarka ugu caansan, tusaale ahaan xaddididda isticmaalka barnaamijyada na ceyrinaya, sida macaamiisha farriinta diraya. Markaad ka baxdo maalinta shaqada, kaliya ka jooji qaybta hoose, oo ku habboon ikhtiyaarka oranaya "Disable Dis Balance".
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sida loo xadido waqtiga aad ku isticmaalayso mobilkaaga EMUI
Dhacdooyinka Dayaxa ee Dayaxa waxay u imaanayaan League of Legends Wild Rift oo leh Muuqaal Daawade, Dib-u-celin, iyo Inbadan
The Oppo Find X3 abid ku dhow in ay naga yaabiso